राजधानीमा कसरी लगाइन्छ कलिला बालबालिकालाई देहव्यापारमा ? – Medianp
राजधानीमा कसरी लगाइन्छ कलिला बालबालिकालाई देहव्यापारमा ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, मङि्सर १९, २०७४०५:५९
चार वर्षअघिको कुरा हो । वेदना त्यसबेला १४ वर्षकी थिइन् । थानकोटतिरको एउटा होटलमा काम शुरू गरेको दिन साहूले ग्राहकलाई खाना पुर्‍याइदेऊ भने । उनी खाना लिएर गइन्, कोठा साँघुरो थियो । “ग्राहकले खाना होइन, मेरो हात समाए” वेदना भन्छिन्, “खाना पुर्‍याउनु भनेको ग्राहकसँग बस्नु रहेछ ।” त्यो क्याबिन रेस्टुरेन्ट थियो ।
गाउँकै चिनजानका मान्छेले उनलाई मासिक ४/५ हजार तलब हुने सजिलो काम लगाइदिन्छु भनेर काठमाडौं ल्याएका थिए । वेदना भन्छिन्, “फोन उठाउने काम हुन्छ भन्थे र विश्वास गरें । यस्तोमा परें ।”
गाउँमा हुँदा उनी नजिकैको स्कूलमा पढाउँथिन्, महीनामा ७/८ हजार कमाइ हुन्थ्यो । धेरै कमाइ गर्न काठमाडौं आउने हुटहुटी चल्यो । “तर, काठमाडौंमा यस्तो काम पो गर्नुपर्दोरहेछ” सफलले भनिन्, “अब घर फर्केर जाउँ भने भागेर गएकी भन्लान्, यहाँ अरू काम केही पाइन्न, के गर्ने, के ?”
लुईंटेलका अनुसार, २०७४ कात्तिकमा ७ महीनाकी गर्भवती रहेकी एकजना यौनकर्मी किशोरी सेल्टरमा आइपुगिन् । काठमाडौंमै घर भएकी र ९ कक्षामा अध्ययनरत बताउने उनी गर्भवती भएपछि घरमा थाहा हुने डरले बच्चा जन्माउन सेल्टरमा पुगेकी थिइन् । लुइँटेल भन्छिन्, “उमेर १८/१९ वर्ष बताए पनि हेर्दा १६ वर्षकी जस्तै देखिन्थिन् । ७ महीनाको गर्भपतन गराउन मेडिकलले डेढ लाख रुपैयाँ मागेपछि पैसा तिर्न नसकेर उनी सेल्टरमा आएकी थिइन् ।”
ती संघसंस्थाहरूका अनुसार होटल, खाजाघर, गेस्ट हाउस र क्याबिनमा बालिका र किशोरीहरूलाई ‘ग्राहक रिझाउन’ कै लागि राखिन्छ । उनीहरू प्रायः १२/१३ देखि १७ वर्षसम्मका हुन्छन् । तर, उमेर सोध्यो भने मालिक र उनीहरू स्वयंले पनि साँचो बताउँदैनन् । धेरैजसो राम्रो कमाइ हुने आशामा गाउँबाट आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई नै होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले विस्तारै यौन कार्यमा लगाउँछन् । त्यहाँ भाँडा माझ्नेलगायतका सरसफाइका काम गर्न पाका महिला या केटाहरूलाई राखिएको हुन्छ । मसाज सेन्टरहरूमा भने प्रायः १५÷१६ वर्षका बालिका–किशोरीदेखि २५/३० वर्षका महिला हुने गरेको चेन्ज नेपाल, ठमेल सम्पर्क कार्यालयकी प्रमिला चापागाईंले बताइन् ।
हुँदाहुँदा अब आवरणमा किराना पसल राखेर समेत यस्तो कार्य हुन थालेको छ । माइती नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता उमा तामाङले आफूले निरीक्षण गर्दाको एउटा घटना सुनाइन्– “धुम्बाराहीमा चारतले घरको भुइँतलामा किराना पसल थियो । छिमेकीले शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि माइती नेपालबाट हामी हेर्न गयौं । घर भित्र दुइटा कोठा थिए । त्यहाँ १६–१७ वर्षका दुई किशोरी थिए । उनीहरूलाई एकजना ग्राहकबाट ५०० लिने गरी यो काममा लगाइएको भेटियो ।”
(लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
नरजंग गुरुङको बारुला सार्वजनिक (भिडियो)
हिन्दु धर्म हटाइहालियो‚ अब फिर्ता ल्याउने सम्भावना कम छ- प्रधानमन्त्री